A na-etinye oge dị ukwuu na-ekwu maka ma ahịa ahụ na-aga ma ọ bụ na-agbada, nke a bụ na ndabere ndị mmadụ na-achọ 'ego dị mfe' ma ọ bụ 'ebili mmiri ọhụrụ' iji banye. A ga-ahụrịrị ahịa dị ka ego a na-erite na afọ ise ma ọ bụ afọ asaa ọ bụla - chọọ inweta ego gị n'ụzọ ị ghotara ma nwee ike ikwugharị ya.
Will ga-enweta ego mgbe niile ma ọ bụrụ na ị na-enye ọrụ kachasị mma ma bụrụ onye na-edozi nsogbu na ụlọ ọrụ. Ebumnuche kachasị mma; ịgbazite ụlọ kachasị mma na ịdị ọcha, lekọta ndị bi n'ụlọ gị ma lelee na ha dịkwa mma otu ugboro n'ọnwa, nwee mmega ahụ kama ịzobe ndị bi n'ụlọ gị - kpọtụrụ ha ọbụlagodi na ihe niile na-aga nke ọma, ị ga-ahụ na ọ bụrụ na ha ma na ị ga-akpọ. (ma ọ bụ onye na-echechitere gị) ha agaghị enwe mkpa ọ bụla iji kpọọ gị obere ihe ọ bụla.
Nwee mpako itinye azụmaahịa azụzigharị azụmaahịa azụmaahịa, toaa ntị na nkọwa dị nta nke anaghị adị oke ọnụ mana na-eme ihe niile; gaa n'ụlọ ahụ n'oge maka ilele, mee ka ụfọdụ mepee emepe emepe ma ị nwere igodo ziri ezi, bulie ozi ọgbaghara ahụ niile, jide n'aka na ihe niile dị ọcha, kpochapụ ahịhịa, hapụ ikuku dị ọcha banye na ụlọ ahụ ma ọ bụrụ na ọ dịla tọgbọ chakoo, nweta obere ọrụ DIY Mee - ọ bụ naanị uche bido ịchị nke na-egosi na ị hụrụ n'anya. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ndị ahịa gị, ha ga-ege ntị n'okwu gị karịa karịa ma ọ bụrụ na a naghị elekọta ha anya.
Choro ezigbo nsogbu maka idozi mgbe ị na-azụ ma ọ bụ na-ere, ịchọta ihe na-ekpughe ọtụtụ uru. Onye na - azụ ahịa bụ ọkachamara na - achọpụta nsogbu ya, yabụ gozie ya, a ga - enye gị ohere iji nweta ego site na idozi ihe onye ọzọ chere na ọ bụ nsogbu ha enweghị ike idozi ma ọ bụ agaghị edozi onwe ha. Mụta inwe ọ enjoyụ ịchọta nsogbu ndị dị na nkwekọrịta na itinye ọnụahịa na idozi ha, nke a nwere ike ịbụ mbelata ọnụahịa ịzụta ihe, ọnụ ụlọ mgbazinye ego dị elu, ọnụahịa dị elu ma ọ bụ ụgwọ dị ala - mgbe ahụ, n'agbanyeghị ahịa ị na-eme ị ga-enweta ego mgbe niile.
“Gaa maịl ọzọ”